Wararka - Maro-xidhka oo aan tolmo lahayn
Aragtida dadweynaha, dharka dhaqameed ayaa la tolay. Magaca dharka aan dunta lahayn ayaa wareersan, runti ma wuxuu u baahan yahay in la tolo?
Dhar aan tolmo lahayn ayaa sidoo kale loo yaqaannaa dhar aan xirnayn, kuwaas oo ah dhar aan u baahnayn in lagu xiro ama lagu xiro. Dhaqan ahaan looma samayn isdhexgalka iyo dunta midabka midba midka kale, laakiin maro lagu sameeyay si toos ah fiilooyin isku xidha iyadoo la adeegsanayo qaababka jirka. Marka la eego habka wax soo saarka, dharka aan tolnayn ayaa si toos ah u isticmaalaya jajabyada polymer, fiilooyinka gaagaaban ama fiilooyinka si ay u sameeyaan fiilooyin iyada oo loo marayo hawo ama shabaq farsamo, ka dibna lagu xoojiyo miiqashada, cirbadda la feedho ama la duubo kulul, oo ugu dambayn la sameeyo dhar aan tolmo lahayn ka dib marka la dhammeeyo Dharka.
Habka wax soo saarka ee dharka aan tolmo lahayn ayaa loo qaybin karaa talaabooyinka soo socda:
1. Fiilooyinka dunta; 2. Fibreeti shabag ah; 3. Hagaajinta shabaqa fiber; 4. Samee daaweynta kuleylka; 5. Ugu dambayntii, dhammaystirka iyo ka shaqaynta.
Marka loo eego sababaha dharka aan tolnayn, waxaa loo kala saari karaa:
Ku miiqda dhar aan tolmo wanaagsan lahayn: Diyaarado biyood oo ganaax adag ayaa lagu buufiyaa hal ama dhowr lakab oo ah xargaha faybarka si ay isugu xidhaan fiilooyinka midba midka kale, taas oo markaa ku xoojinaysa xargaha gunta.
Dhar-ku-xirnaanta kuleylka-kululeeyaha: ku darista bucshiradda ama budada budada ah kululeeyaha kululeeyaha wax xoojinaya websaydhka, sidaas darteed websaydhka fiber-ka ayaa kululaanaya oo dhalaalaya ka dibna la qaboojinayaa si loogu xoojiyo maro.
Saxar hawo-saarnayn oo aan-tolmo lahayn: oo sidoo kale loo yaqaan warqad aan boodh lahayn, warqad qalalan oo samaysa dhar aan tolmo lahayn. Waxay adeegsaneysaa tikniyoolajiyad hawada ladhigay si loogu beddelo fiilooyinka alwaaxda hal fiilooyin ah, iyo fiilooyinka hawada la dhigo ayaa loo isticmaalaa in lagu qurxiyo fiilooyinka ku jira daahyada webka ka dibna lagu xoojiyo maro.
Dhar qoyan oo aan tolmo lahayn: Waxyaabaha fiber-ka ee ceyriinka ah ee la dhigo qalabka biyaha ayaa loo furaa hal fiilooyin, iyo walxo kala duwan oo ceyriin ah ayaa la isku daraa si ay u noqdaan silsilad ganaax ah, oo loo qaado habka farsamaynta webka, webkuna waa lagu mideeyay maro xaalad qoyan.
Spunbond dhar aan-tolmo lahayn: Ka dib markii polymer-ka la soo saaray oo la kala bixiyay si loo sameeyo fiilooyin joogto ah, waxaa lagu dhejiyaa shabaq, iyo shabaqa fiber-ka ayaa la isku xidhaa ama si farsamo ahaanba loo xoojiyaa si uu u noqdo dhar aan tolmo lahayn.
Meltblown dhar aan-tolmo lahayn: Tallaabooyinka soo-saarka waa polymer aqbasho-dhalaalida extrusion-fiber formation-fiber qaboojinta-net formation-xoojinta maro.
Dhar cirbadeed oo aan-tolmo lahayn lagu muday: Waa nooc ka mid ah maro-qoyan oo aan-tolmo lahayn, oo u adeegsada waxyeellada cirbadaha cirbadaha si ay ugu xoojiso websaydhka qalafsan ee maro.
Mashiin aan tolmo lahayn: Waa nooc ka mid ah maro aan tolmo lahayn oo la qalajiyey, kaas oo adeegsanaya qaab wareegsan oo wareegsan si loo xoojiyo webka dunta, lakabka dunta ah, waxyaabaha aan tolnayn (sida warqadda caagga ah, iwm.) Ama isku darka si loo sameeyo dhar aan tolmo lahayn.
Alaabta ceyriinka ah ee loo yaqaan 'fiber fiber' ee loo baahan yahay in laga sameeyo dhar aan tolmo lahayn ayaa aad u ballaaran, sida suufka, hemp, dhogorta, asbestos, fiber galaas, fiber viscose (rayon) iyo fiber synthetic (oo ay ku jiraan nylon, polyester, acrylic, polyvinyl chloride, vinylon) Sug ). Laakiin maalmahan, marada aan tolnayn ma aha kuwo inta badan laga sameeyo fiilooyinka suufka ka sameysan, iyo fiilooyin kale sida rayon ayaa meeshiisii ​​galay.
Dhar aan tolmo lahayn ayaa sidoo kale ah nooc cusub oo ka mid ah maaddooyinka bey'adda u fiican, kaas oo leh astaamaha uumiga-caddayntiisa, neefsashada, laastikada, miisaanka fudud, oo aan guban karin, fududahay in lakala baxo, aan sun lahayn oo aan cuncun lahayn, midab hodan ku ah, qiimo jaban, dib loo cusboneysiin karo, iwm, sidaa darteed arjiga dalabka Aad ayuu u ballaaran yahay.
Ka mid ah qalabka warshadaha, dharka aan tolmo lahayn ayaa leh astaamaha waxtarka sifeynta sare, dahaadhka, kuleylka kuleylka, caabbinta aaladda, caabbinta alkali, iyo iska caabbinta ilmada. Badanaa waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo warbaahinta miiraha, daboolka dhawaaqa, dahaarka korantada, baakadaha, saqafka iyo walxaha wax lagu xoqo, iwm. Warshadaha daruuriga ah ee maalinlaha ah, waxaa loo isticmaali karaa sida qalabka dahaadhka dharka, daahyada, qalabka qurxinta derbiga, xafaayadaha, bacaha safarka, iwm. Alaabada caafimaadka iyo caafimaadka, waxaa loo isticmaali karaa soo saarista dharka qalliinka, dharka bukaanka, maaskaro, suumanka nadaafadda, iwm.